Warbixin: Sedex Arin Oo Sabab U Ahaa Guul Daraddii Man United Xalay Ka Qabsatay Barcelona – Wararka Ciyaaraha Maanta
Warbixin: Sedex Arin Oo Sabab U Ahaa Guul Daraddii Man United Xalay Ka Qabsatay Barcelona
April 17, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta, Warbixino 0
Barcelona ayaa iska xaadirisay wareegga 4-ta Champion-ka waxa ayna sedex gool uga talaabsadeen United oo lugta labaad ee wareegga 8-da marti ugu aheyd waxaana laba gool lahaa Messi halka kan sedexaad uu saxiixay Philippe Coutinho xilli lugtii hore-na Barca ay ku soo badiyeen hal gool.
Barca ayaa haatan sugeysa cidda soo badisa kulanka FC Porto iyo Liverpool ee caawa ka dhacaya garoonka kooda reer Portugal .
United ayaa kulanka ku biloowday hab aad u wacan , iyaga ayaan ku wacnaa hindsidda weerarada , waa ay haysteen kubadda waxa ayna ka faa`ideysanayeen deg degsiimada Martial , Rashford iyo Lingard kuwaasi oo taageero ka helayay qadka dhexe waxa ayna halista United timid daqiiqaddii koowaad ka dib kubad .
Barca waa ku jahwareereen hab ciyaareedkii United ku biloowdeen waliba Camp Nou joogta ,United halis ayayna ahaayeen kullamaa ay taagaan qadka dhexe Barca balse United kama faa`ideysan gaabiska fal celineed ee Barca balse Barca oo jaanis lagu haystay hadana laga faa`ideysan dabcan si qurux badan ayaad u qaadaneysaa casharada uu bixiyo Messi .
Tababaraha United ee Ole waxa uu Jones ku soo bilaabay garabka middig isaga oo ka baqayay jihada ay joogaan Alba iyo Messi balse waxaan aragnay in Messi uu xoriyad u dhaqaaqayay isag oo biloowgii u janjeeray dhanka bidix oo uu joogay Young xilli laacibkaas kubaddii ugu horeysay uu heleyna sida caadada ah waa uu dhaliyay .
Ka dib goolkii labaad , Barca guud ahaan kubadda iyagaa ayaa qabsaday , markii ay rabaan kubadda waa ay dadajinayeen Barca markii ay rabaanna waa ay dajinayeen .
Mushkiladii United ee kulankaan wax ay aheyd in ay ka maqneyd in ay muujiyaan qibrad oo markii Messi uu dhaliyay goolkii koowaad ma filaneyn in mid labaad oo deg deg ah uu imaanaayo waxaase iga darneyd qaladaadkii qadka dhexe iyo kii ugu weynaa ee uu sameeyay goolhaye De Gea .
Run ahaantii United waxa ay u baahan tahay xiddigo muujian kara deganaasho iyo qibrad ay sii dheer tahay Kabtan u dhaqmi kara sidii Roy Keane ee ma aha Pogba .
Marka aan sidaas leeyahay eeg arintaan,ciyaartooyda United qaarkood deg degga ayaa ka batay oo bilaa fikrad waaye sida Martial , Lingard iyo Rashford , kuwo leh hal abuur balse deg degga uu ka maqan yahay sida Pogba dhamaantoodana waxa ay isla qabaan oo ay ahaayeen maqane joogayaal .
Xiddig waliba oo doonaya in uu uu is muujiyo waxa ay United u tahay u gaar sahal ah waayo daafacooda waa dal daloolaa waxaana ka maqan United in ay cadaadis saaraan kooxda ka soo horjeedda oo ay raacdaan marka ay kubadda aysan cagtooda ku jirrin , Philippe Coutinho sahal ayuu ku helay u gaartiisa oo ma jirrin cid cadaadineysay waana midda keentay goolkii sedexaad .